HomeInterviewनेपाली साहित्य विश्वस्तरको उचाइमा पुगिसक्यो
July 6, 2017 Interview 0
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सुमलकुमार गुरुङको नाम नौलो होइन । पर्वत जिल्लाको चित्रेमा जन्मिएका गुरुङले भारतको आसामबाट मैट्रिक पास गरे भने सिलाँङको नर्थ ईस्टर्न हिल युनिभर्सिटीबाट स्नातक गरे । स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका गुरुङले बाबुबराजुदेखि चल्दै आएको सैनिक पेसालाई नै अँगाल्न पुगे । १६ वर्षसम्मको सैनिक क्लर्कको रुपमा सेवा गरेपश्चात् अवकाश पाएका गुरुङले कास्की जिल्लामा अवस्थित लुम्ले कृषि केन्द्रमा काम गर्ने मौका पाए । अध्ययनको सीमा हुँदैन, भनेझै गुरुङले थुप्रै कृतिहरु लेखेर नेपाली साहित्य क्षेत्रको विबकासमा एउटा इँटा थप्न सफल भएका छन् । अत्यन्त सरल स्वभावका गुरुङले ‘खोज्दैछु नेपाल’ (कवितासङ्ग्रह–२०१६), ‘फेरि हङकङको सेरोफेरो’ (यात्रा संस्मरण–२०१६), ‘अतीतको आँखिझ्यालभित्र नियाँल्दा’ (संस्मरण–२०७१), ‘मेजर अर्जुनको औंठी’ (कथासङ्ग्रह–२०६९), ‘युरोप यात्राका अनुभूतिहरु’ (नियात्रा–२०६८), ‘यात्रा स्पर्श’ (समूहमा–२०६८) र नब्बेको दशकदेखि विभिन्न पत्रपत्रिका र वेभसाईटहरुमा लेख र रचनाहरु प्रकाशन गरिसकेका छन् भने ‘पूर्वी अमेरिकालाई स्पर्श गरेपछि’ नियात्रा, ‘गोर्खा कथाव्यथा’ इतिहास, ‘सुमलका निबन्धहरु’ निबन्ध, मुक्तकसङ्ग्रह र गजलसङ्ग्रह छिट्टै पाठकमाझ पस्कँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेलायत च्याप्टरका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ बेलायतमा रहेका विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध छन् । विगत तीन दशकदेखि साहित्य सिर्जना र समाजसेवामा आपूmलाई उभ्याउँदै आएका साहित्यकार एवं समाजसेवी सुमलकुमार गुरुङसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि घान्द्रुके कान्छाले गरेको छोटो कुराकानी । बेलायतमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? बेलायत बसाई विगत ९ वर्षदेखिको छ । निकै देशहरूलाई कर्मक्षेत्र बनाउँदै आउँदा यो राष्ट्र अन्तिम राष्ट्र नै होला भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । तपाईको समाजसेवा पहिलो हो कि, नेपाली साहित्य ? साहित्य नै समाजको दर्पण हो । त्यसैले आफू एकजना साहित्यकार भएको नाताले समाज र साहित्यमा कुन पहिलो र दोस्रो भन्ने हँुदैन । म समाजसेवामा रमाइरहँदा मेरो कलमले साहित्य पनि कोरिरहेको हुन्छ । गुरुङको छोरो त्यसमा पनि लाहुरे, साहित्यसँग कसरी मितेरी गाँस्न पुग्नुभयो ? मैले ब्याचलर तहको पढाई सकेपश्चात् आर्मीमा ज्वाइन गरेको थिएँ । स्कुले जीवनदेखि नै सिर्जनामा मेरो अभिरुची थियो । भर्ती हुनुअघि नै मेरो सिर्जना प्रकाशित भइसकेको थियो । र, निबन्ध लेखनबाट पुरस्कृत भएको पनि थिएँ । आर्मी ज्वाइन गरेपश्चात् केही कालको लागि मेरा सिर्जनाहरू अवरुद्ध थिए तर विगत पच्चीस वर्षदेखि केही काल सुषुप्त अवस्थामा रहेको साहित्यिक उत्कण्ठ पलाउँदै आयो र अहिले लेखन निरन्तर छ । अहिलेसम्म कतिवटा सिर्जना पाठकमाझ पस्कनु भयो ? ती कस्ता खालका सिर्जना हुन् । अहिलेसम्म मेरा ६ वटा कृतिहरू प्रकाशन भइसकेका छन् । तीनवटा नियात्रा, कवितासङ्ग्रह, कथासङ्ग्रह र संस्मरण प्रकाशित छन् । अन्य विधामा मुक्तक, गीत, गजल, निबन्ध आदि समसमायिक पत्रपत्रिका, वेभ पत्रिका तथा समूहगत कृतिहरूमा प्रकाशित छन् । अझ प्रकाशन गर्नु पर्ने चार पाँचवटा कृतिहरू तयार छन् ।
साभार ; एभरेस्ट टाईम